४९ स्थानीय तहको प्रमुखका साथ कांग्रेस पहिलो स्थानमा, अरु पार्टीले कुन-कुन स्थान हासिल गरे त? « Sansar News
४९ स्थानीय तहको प्रमुखका साथ कांग्रेस पहिलो स्थानमा, अरु पार्टीले कुन-कुन स्थान हासिल गरे त?
२ जेष्ठ २०७९, सोमबार १५:३९
काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । । आज अपराह्न १ः३० बजेसम्म सार्वजनिक ११८ स्थानीय तहको मत परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ ।